Halkee ayuu iTunes ku kaydiyaa firmwares-ka iPhone, iPad? | Wararka IPhone
Pablo Aparicio | | iTunes, Casharrada iyo buugaagta
Laga soo bilaabo nooca ugu horreeya ee iPhone OS, faylasha ama qalabka qalabka macruufka ah wuxuu leeyahay kordhinta .ipsw (Barnaamijka iPhone). Hal dariiqo oo lagu sharxi karo waxa faylka .ipsw uu yahay waxay noqon lahayd in la yiraahdo waa sawirada diskiga ee nidaamka hawlgalka ee qalabka iOS. Qaar ka mid ah barnaamijyada Mac, muuqaalka diskiga ayaa ah .dmg, barnaamijyo kale oo badan ayaa sawirradan waxay ku yimaadaan qaab .iso iyo, in kastoo aan lagu duubeynin cajalad, sawirada noocan ah ee loogu talagalay iPhone, iPod Touch ama iPad waa faylasha .ipsw.
Sida firmware ama nidaamka hawlgalka ee ay yihiin, .ipws faylasha ayaa lagama maarmaan noqon doona si loo cusbooneysiiyo ama loo soo celiyo iPhone, iPod Touch ama iPad ka iTunes, sidaa darteed waxaan kaliya ku furi karnaa iyaga oo leh asalka Apple player, labadaba kombuyuutarrada Mac iyo Windows (aan laga heli karin Linux). Iyada oo tan la sharraxay, weli waxaa jira waxyaabo badan oo lagu sharxi karo iyo inta ka hartay qoraalkan waxaan isku dayi doonaa inaan xallino dhammaan shakigaaga ku saabsan shirkadaha qalabka iOS.
1 Xagee loo keydin karaa qalabka adag ee iTunes
2 Sida loo furo IPSW-ka iTunes
3 Sida loo ogaado haddii Apple wali saxiixayo nooc iOS ah
4 Halkee lagala soo bixi karaa nooc kasta oo iOS ah oo loogu talagalay iPhone ama iPad
5 Halkee lagala soo bixi karaa nooca ugu dambeeya ee iTunes
6 Sida loo cusbooneysiiyo iTunes
Xagee loo keydin karaa qalabka adag ee iTunes
Sida nidaamyada kaladuwan ee kaladuwan ay yihiin, markay iTunes ka soo degsato qalab adag iPhone, iPod Touch, ama iPad, ayay sidaas ku sameysaa waddooyin kala duwan waxay kuxirantahay inaan ku soo dejisanay Mac ama Windows. Waddooyinka ayaa noqon doona kuwa soo socda:
~ / Library / iTunes / iPhone Cusbooneysiinta Software
Si loo helo galkaan, waa inaan furno Finder, dhagsii Tag miiska oo taabo furaha ALT, taas oo ka dhigi doonta ah Biblioteca.
C: / isticmaaleyaasha / [Magaca isticmaalaha] / AppData / Roaming / Apple Computer / iTunes / iPhone Cusbooneysiinta Software
Windows-ka galka ayaa lagu qarin doonaa, marka waa inaan awood u yeelanaa "Muuji fayl qarsoon" ama si fudud koobi oo dhaji dariiqa cinwaanka barta cinwaanka ee Furaha Faylka.
Sida loo furo IPSW-ka iTunes
Xitaa haddii faylasha .ipsw loogu talagalay iTunes kaliya, si otomaatig ah uma furi doono haddaan labalaabno iyaga guji. Si loo furo waa inaan sameynaa waxyaabaha soo socda:
Waxaan fureynaa iTunes
Waxaan ka xulannaa aaladdayada bidixda kore.
Waana halkaan halka muhiimka ah ka timaado: waxaan riixnaa fure ALT oo waxaan gujinnaa Soo Celinta ama Cusboonaysiinta.
Waxaan raadineynaa faylka .ipsw waana aqbalnaa.
Sida loo furo feylka IPSW ee Mac
Windows-ka howshu waa ku dhowdahay in la raad raaco, iyadoo leh farqiga kaliya ee aan ku qasbanaaneyno inaan ku badalno furaha ALT shift (xarafka weyn) Wixii kale oo dhan, hawshu waa sax tan Mac.
Sida loo ogaado haddii Apple wali saxiixayo nooc iOS ah
In kasta oo ay run tahay in Actualidad iPhone inta badan aan ogeysiinno markay joojinayaan saxiixa nooc iOS ah, haddana sidoo kale waa run in aan dooneyno inaan ogaano xaaladda nooc ka mid ah oo aan daabacnay maqaal muddo dheer. Habka ugu wanaagsan ee lagu ogaan karo haddii Apple uu saxiixo nooc iOS ah waa kuwan soo socda
Aan tagno websaydhka ipsw.me
Waxaan u xulanaa qalabka qalabka
Waxaan soo bandhigeynaa liiska qalabka 'firmware menu', isla qeybtaas, waxaan ku arki doonnaa cagaar haddii noocaas macruufka ah wali la saxiixay. Ma fududaan karin.
Isla bogga waxaan sidoo kale ka heli karnaa qaybta "Saxeexyada Firmwares" ama si toos ah adoo gujinaya xidhiidhkan. Marka aan ku jirno boggaas, waa inaan kaliya doorannaa aaladdayada oo aan hubinno haddii Apple uu sii wado inuu saxeexo nooca na xiiseynaya.
Halkee lagala soo bixi karaa nooc kasta oo iOS ah oo loogu talagalay iPhone ama iPad
Degel aad u wanaagsan oo la cusbooneysiiyay ayaa goor dhow laga xiray halka aan ka soo dejisan karno wixii firmware ah ama nidaamka hawlgalka Apple, iyo sidoo kale in la ogaado haddii firmware weli la saxiixayo Si kastaba ha noqotee, marka lagu daro degelkii hore, waxaan marwalba haysannaa ikhtiyaari ikhtiyaari ah oo sahlan oo laxasuusto oo ah getios. Way fududahay in la xasuusto maxaa yeelay waa "get iOS" af Ingiriisiga ah (Get iOS) .com. Gudaha getios.com waxaan heli doonnaa dhammaan sheybaarada aan u baahan karno. Xaqiiqdii, waxaa jira qaar la heli karo oo aan hadda la saxiixin, sidaa darteed 100% waa hubaal inaan awood u yeelan doonno inaan kala soo baxno wixii firmware ah ee iPhone, iPad, iPod Touch iyo Apple TV oo sii wadaya saxiixiisa.
Halkee lagala soo bixi karaa nooca ugu dambeeya ee iTunes
On Mac, iTunes ayaa lagu rakibay si caadi ah. Si kastaba xaalku ha ahaadee, marwalba si khalad ah ayaanu uga saari karnaa ama sababo jira awgood, taas oo ah inaan dib u cusbooneysiinno. Tan awgeed, waxay ku filnaan doontaa inaan aadno xagga Website-ka rasmiga ah ee iTunes oo soo degso. Isla degelku wuxuu ansax u yahay labada Mac iyo Windows wuxuuna na siin doonaa soo dejinta mid ama nooc kale iyadoo kuxiran nidaamka aan ka booqano webka.
Haddii aan rabno inaan kala soo baxno nooc ka duwan, waa inaan hoos u rogno oo aan dooranno "Get iTunes for Windows" ee Windows ama "Get iTunes for Mac" si aad u soo dejiso nooca OS X.
Xusuusnow inay aad muhiim u tahay cusboonaysi iTunes si aad u rakibtid noocyadii ugu dambeeyay ee iOS on our iPhone ama iPad, sidaa darteed, waxaan ku sharxi doonaa sida loo sameeyo hoos.
Sida loo cusbooneysiiyo iTunes
Haddii aan rabno inaan adeegsanno hawl cusub ama aan hubinno inaan isticmaaleyno nooca ugu dambeeyay ee iTunes, waa inaan hubinno haddii aan isticmaaleyno nooca ugu casrisan. Waa tan sida loo cusbooneysiiyo iTunes labada Windows iyo Mac:
Si aad u cusbooneysiiso iTunes-ka ku jira Mac, kaliya fur barnaamijka 'App App' oo geli qaybta Updates. Dhinaca kale, haddii aan cusbooneysiin otomaatig ah shaqeyno, waxaan heli doonaa ogeysiis ah in cusbooneysiin la heli karo. Haddii aan aqbalno ogeysiiska, way soo dejineysaa oo si toos ah ayey u rakibaysaa.
Haddii aan dooneyno inaan ku cusboonaysiinno iTunes-ka Windows-ka waxay kaloo sheegeysaa inay si otomaatig ah u cusbooneysiineyso laakiin, maadaama aanan wax badan u isticmaalin sidoo kale, anigu si buuxda uma hubo. Waxa aan ogahay ayaa ah haddii aan furno iTunes-ka oo uu jiro nooc la cusbooneysiiyay, waxaan heli doonnaa ogeysiis na geyn doona websaydhka si aan u soo dejino nooca cusub ee qalabka warbaahinta Apple.
Waxaan u maleynayaa inay intaas tahay. Waxaan rajeynayaa inaan ku caawiyay adiga iyo inaadan mar dambe wax shaki ah ka qabin feylasha .ipsw. Haddii kale, ma jiraan wax aad xiisaynayso inaad ka ogaato firmware-ka macruufka?
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » iTunes » Halkee ayuu iTunes ku kaydiyaa qalabka lagu soo dejiyo ee laga soo dejiyo iPhone, iPad?
Dhadhaab ah dijo
Marka hore, hambalyo bogga,
Waxa aan awoodi karay inaan ka fahmo halkan ayaa ah hadii aan leeyahay qof ila shaqeeya shirkad 312 ah oo ku keydsan kombuyutarkiisa, waxaan badali karaa 313keyga oo waan wada rakibi karaa.
Ku soo jawaab Passte
KALIYA waxay u adeegtaa si looga fogaado inaad dib u soo dejiso faylka internetka, laakiin si toos ah ugala soo bax kumbuyuutarkeena (haddii iTunes horey u soo dejisay).
Jawaab Enrique Benítez
Aad baad u mahadsantahay, su'aashii waa la xaliyay !!
Salaan Salaan kadib waxaan sameeyaa talaabadan waxaan dhigay wadadii sahaminta waxaana ku darsadaa adeegsadehayga dibna uma xirto. Fadlan i caawi aniga waan ku qadarin doonaa naftayda. Waxaan hayaa windows 7 premium
Ku jawaab elphoneix
Aan aragno, iTunes-kaygu wuxuu soo dejistay cusbooneysiinta 4.2.1, ipodkeyga macluumaadka wuxuu u muuqdaa sidii inaan haysto ... laakiin markaa waxaan raacayaa wadadii aad isiisay waxna ma jiraan ...
Ku jawaab Ipoder
Waxaan horeyba u tijaabiyay wax walba, mana heli karo qalabka kumbuyuutarka ee iphone 3g .. Waxaan rabaa in aan jaleeco laakiin feylashaas la'aanteed ma awoodo, caawinaad baan u baahanahay!
Miyaad horay u dhaqaajisay ikhtiyaarka si aad ugu muujiso fayl qarsoon daaqadaha? Waxaan u maleynayaa inay taasi noqon karto dhibaatada ... waxay ku jirtaa abaabul, galka iyo xulashooyinka raadinta, eeg, waana inaad dhigtaa ikhtiyaarka si aad u muujiso feylal, fayl qarsoon iyo darawallo
garacias Waan awalba heli karay feylka
Waad ku mahadsantahay macluumaadka, waxay ahayd mid aad waxtar u leh ...
Aad baad u mahadsantahay, su'aasha la xaliyay
Waxaan ku riyooday inaan sameeyo ururkeyga, laakiin ma aanan kasban lacag igu filan oo aan taas ku sameeyo. Ilaah baa mahadleh saaxiibkay wuxuu kugula taliyay inaad qaadato amaahda ganacsiga. Intaa ka dib waxaan helay amaahdii muddada-gaaban waxaanan rumeeyey riyadaydii hore.
Ku jawaab Bradford35KRYSTAL
qorista qaaska ah dijo
Si aad uga hesho wararka ku saabsan qoraalkan wanaagsan, ardaydu waxay ka iibsadaan qoraallada qoraalka hore iyo qoraalka caadiga ah adeegyada qorista waraaqaha. Laakiin qaar ka mid ah adeegyada qorista waraaqaha waxay bixiyaan qormada qorista ee ku saabsan boostadan wanaagsan.
Ku jawaab qoraal ahaan
waraaqaha muddada dijo
Waxaad curisay aqoon sare si aad uga caawiso ardayda aan qibrada u laheyn howlaha qorista warqadooda cilmi baarista, waxaan filayaa. Xitaa adeegga qorista warqaddu ma lahan awood ay ku sameyso curiska kulleej ee caanka ah.
Ku jawaab waraaqaha ereyga
Aad baad u mahadsantahay, runtu waxay ahayd waxaan horey u raadiyay kahor waligayna ma aanan helin
Anigu ma haysto faylka cusboonaysiinta softiweerka iPhone-ka ee Windows XP.
Mahadsanid Wanaagsan- !! Wax badan ayey i caawisay !! Haa waan helay waana iga badbaadisay 2 saacadood adoo markale soo dagsaday
Jawaab La BAndis
Waad salaaman tahay, aad baad u mahadsan tahay, macluumaadkaagu waa jawharad.
Kuwa aan u muuqan galka, waxaa laga yaabaa inay qarsoodi yihiin.
Midig u guji bilowga (calaamadaha daaqadaha ee geeska bidix ee hoose)
tag daaqadaha sahaminta / dukumiintiyada / abaabulo / aragtida halkaasna waxay awood u siineysaa ikhtiyaarka ah in lagu muujiyo faylasha iyo faylalka qarsoon.
Jawaab joselo. 82
tani waa wadada halka ay ku qarsoon yihiin ipws-ka windows 7 laakiin mashiinka wax lagu qoro ku qor waxyaabaha soo socda: Cusbooneysiinta Software-ka waxayna kugu geyneysaa galka ipws-ka ee soo dejinta
Jawaab ku bixi BillGate
Wiil bannaan dijo
Waad mahadsan tahay ... Waad ogeyd sida loo sharxo.Waxay qaadatay 1 bilood in la ogaado
Jawaab Space Space
doon yar dijo
Subax wanaagsan, ma lihi galkaas jiritaankeyga, sidaan yeelay, maadaama iTunes uusan dooneynin inuu cusbooneysiiyo mar dambe iOS 4 isla markaana uusan wax ka soo dejisan kumbuyuutarkeyga
Ku jawaab cano
haye aad baad u mahadsantahay
Jawaab ku noqo
Firidhsan 56 dijo
aad u wanaagsan !!!!
Jawaab Erobles 56
Haddii aadan halkaas ka heli karin, waxaad siin kartaa C: Dokumentiyo iyo Dhammaan Isticmaalayaasha Nidaamka Barnaamijyada DataAppleInstaller. Ugu yaraan halkaas ayaan ka helay
waad ku mahadsan tahay inay ii adeegtay
mahadsanid lok olo Waxaan si deg deg ah ugu baahanahay si aan u cusbooneysiiyo ipodkeyga iTunes kale maxaa yeelay iTunes-kayga ma istaahilo hehehe aad baad u mahadsantahay
KUNA GRACIAAAAAS waad i badbaadin 3 saacadood oo download ah
DHIB BAAN LEEYAHAY. WAAN DOONAY WINDOWS 8. INTAASANA INTAAN RAADIYO MA HELI KARO. QOF MA I CAAWIN KARAA FADLAN ???…
Jawaab JAGER D
ha ha waan sameeyay !!!… kuwa daaqadaha leh 8 wadadu waa: C: UsersUserAppDataRoamingApple ComputeriTunesiPhone Software Updates
waad mahadsantahay naftayda ayaan u adeegaa
Wadadaas kuma heli karo mac ...
Ku jawaab Luismur8
(geli jeeg gal olcutes faylasha iyo fayl)
Mudane waad mahadsan tihiin, waxtar aad u wanaagsan ...
Ku jawaab Palma
Mahadsanidiin isla markiiba waan helay 😉
mahadsanid, caawimaad weyn
Aaway feylasha ipsw ee ku keydsan nuqulka mashiinka waqtiga? ... Waxaan isku dayaa inaan helo, xitaa ma aqaano sida loo sameeyo galka maktabada oo ka dhex muuqda mashiinka waqtiga.